ककनी गाउँपालिका : चुनावको टिकट कुन पार्टीले पाउने टुंगो छैन, काँग्रेसमै अध्यक्षको ७ आकांक्षी ! « News24 : Premium News Channel
ककनी गाउँपालिका : चुनावको टिकट कुन पार्टीले पाउने टुंगो छैन, काँग्रेसमै अध्यक्षको ७ आकांक्षी !
विदुर । नुवाकोट—स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिए सँगै नुवाकोट—स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिए ककनी गाउँपालिकामा चुनवी सरगर्मी बढदै गएको छ ।
प्रमुखत नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा चुनावी मैदानमा भिडने छन् ।
बिगतमा गुमेको साखं फर्काउन यसपाली नेपाली काँग्रेस कम्मर कसेर लागेको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा काँग्रेस प्रतिशपर्धामा आफुलाई बलियो जनमतमा उभ्याउने कसरतमा छ ।
बिगतमा माओवादी केन्द्रले जितेको ककनीमा यस पटक काँग्रेसले लोकप्रिय मत हासिल गरी बिजय हुने दाउमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि गठबन्धनको तालमेलले टिकट कस्ले पाउने भन्ने कौतहलता पनि आम कार्यकर्तामा छ ।
गठबन्धनले कार्यकर्ताको उत्साहमा कमी मात्र ल्याएको छैन, ठूलै हलचल पैदा गरेको छ । यसै मेसोमा चैत्र २१ गते नेपाली काग्रेसको ककनी गापा स्तरीय बैठक गापा कार्यलय रानिपौवामा बसी गठबन्धनमा नजाने निर्णय गरेको अध्यक्ष भाग्यश्री लामा बताउछन ।
बैठक भाग्यश्री लामाको अध्यक्षतामा बसेको थियो । उनका अनुसार यो पटक आँकाक्षीहरु पनि बढेका छन् । ऋषि कुमार तमाङ्ग, भाग्यश्री लामा, नवराज घिमिरे श्रीरा ढुङ्गाना, दीपेश लामा बिष्णु गुरुङ्ग, र राजन नेगी लगायतका आकाक्षी रहेको बुझिएको छ।
हेरौँ आकाक्षीहरुको ‘स्टाटस तथा प्रोफाइल’
ऋषि कुमार तमाङ्ग
तमाङ्ग, पेशाले पर्यटन ब्यवसायी हुन् । उनी बिगत लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रका साथै समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन ।
नेपाली काँग्रेसको माहाधिबेसन प्रतिनिधी तथा माहासमिति सदस्य समेत भइसकेका तमाङ्ग १४औं माहाधिबेसनमा क्षेत्र नं १ प्रदेस (ख) का सभापतिका प्रत्यासी पनि हुन ।
उमेरले ५० टेकेका तमाङ्ग बाँकी जीवन जनताकै सेवामा बिताउने प्रणका साथ पार्टीमा क्रियासिल रहने बताउछन । उनी नेपाली काँग्रेसका नेता केसी प्यानल निकट मानिन्छन्।
लामा, जनजाती सघं नुवाकोटका अध्यक्ष छन् । मिलनसार ब्यवहार र सरल ब्यक्त्तिो लामा नेपाली काँग्रेस ककनी गापा सभापति पनि हुन ।
१२औ माहाधिवेसनको माहासमिति सदस्य समेत भएका लामा ४६ को जनआन्दोलनका घाइते पनि हुन । उनीपनि केसी प्यानलक नेता मानिन्छन् ।
घिमिरे, ककनीका युवा नेतामा परिचित नाम हो । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका जिल्ला कार्यसमिती सदस्य रहेका घिमिरे प्रकाश शरण महत निकट नेता मानिन्छन् ।
ककनीको पुराना इमान्दार नेताका रुपमा परिचित छन्, ढुङ्गाना । १४औं माहाधिबेसनमा उनी केदी्रय माहाधिबेशन प्रतिनिधिका प्रत्यासी थिए । उनी पनि हाल केसी प्यानल निकट नै मानिदै आएका छन् ।
महत खेमाकै मानिएका लामा, पेशाको हिसाबले निर्माण ब्यवसायी हुन । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासी लामा हाल जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हुन।
नुवाकोटका स्थानीय लोकप्रिय नेताका रुपमा परीचित नेता गुरुङ काग्रेसको १३औं माहाधिवेशनमा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बनेका थिए । काँग्रेस नेता गुरुङ्ग १४औ महाधिवेशनमा भने क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनेका थिए । उनी पनि केसी प्यानल सगं नजिक रहेको बुझिन्छ ।
अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी नेगी पेशाले कृषि कार्यमा आबद्ध छन । नेपाली काग्रेसको १४औ महाधिवेशनमा नेगी क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनेका थिए । उनी पनि नेता केसी निकट नै मानिदै आएका नेता हुनभ् ।